Home AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee John Terry Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Ihe Ọmụma
LB na-egosi Full Story of a Chelsea Legend onye kacha mara aha na aha njirimara; “JT".
Anyị John Terry Child Akụkọ ya na enweghị akwụkwọ akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge.
Nyocha nke Onye Kasị Elu na Chelsea FC akụkọ ihe mere eme na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ ya na ọtụtụ nkwụsị na ON-Pitch Facts banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere akụkọ ihe mere eme ya na Chelsea FC mana ole na ole na-atụle akwụkwọ akụkọ John Terry nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-enweghị adieu ọzọ, ka anyị bido.
Akụkọ John Terry Childhood - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
Malite, aha ya bụ John George Terry. A mụrụ ya na 7th ụbọchị Disemba 1980 na Barking, United Kingdom. A mụrụ ya nne ya, Sue Terry na nna, Ted Terry.
Na-awụ akpata oyi n'ahụ mana eziokwu, Terry hụrụ bọọlụ bidoro site na nkwado ya na Manchester United. Zọ kachasị mma ọ ga-esi bido ọrụ ya bụ ịgwakọta agụmakwụkwọ na bọọlụ.
Ndị nne na nna John debara aha ya na Eastbury Comprehensive School ebe ọ na-egwuri egwu maka ndị otu egwuregwu Sunday Sunday na mpaghara ha.
Ndị otu a n'oge ahụ gosikwara ụfọdụ ndị egwuregwu Premier League n'ọdịnihu n'aha Sol Campbell, Jermain Defoe, Bobby Zamora, Ledley King na Jlloyd Samuel.
Ezi àgwà onye ndu ya gosiputara onwe ya n'oge o bula, o gara n'ihu dika o mere okenye. Mgbe ọ bụ nwata dị afọ iri na ụma John dị ka e gosipụtara n'okpuru ebe a n'ezie, ọ malitere dị ka onye na-eme egwuregwu.
Mgbe ọ bụ nwa okoro, ọ bụ nke mbụ West Ham Unitedsistemụ ntorobịa, isonyere ha dị ka onye midfielder na 1991.
Mgbe ndị ntorobịa toro, ndị na-egwu egwuregwu bịara ya. Ndị a ma ama n'etiti ha bụ ndị na-egwu egwuregwu Chelsea bụ ndị na-awakpo ya mgbe niile.
Afọ atọ mgbe nke ahụ gasịrị, John kwagara Chelsea. Ọ bụ 14 afọ mgbe nnyefe ahụ mere. N'ihi afọ ndụ ya, ọ gara n'ihu kpọọ egwuregwu maka ndị ntorobịa na ndị na-echekwa ya.
Ọ bụ n'ihi ụkọ nke ndị na-agbachitere etiti ka a kpaliri ya ịlaghachi azụ, ọnọdụ ọ gara n'ihu na-egwu maka ọrụ ya niile.
Mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ na 16, ọ chere otu afọ na Atụmatụ Ọzụzụ Ndị Ntorobịa.
Mgbe ọ dị afọ 17, John bịanyere aka na ụlọ ọrụ ndị ọkachamara na London wee mee ya mbụ na 28th ụbọchị nke Ọktoba 1998.
N'oge ahụ dị ka nwatakịrị, Terry gosipụtara n'otu oge na nyocha 2005 na ọ ghaghị ịgafe banyere ememe 50 nkwenkwe ụgha tupu egwuregwu ọ bụla.
Mgbe ezumike nká Desailly, onye njikwa ọhụrụ Chelsea José Mourinho họọrọ Terry dị ka onyeisi ndị agha ya. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
John Terry Bios -Nmekọrịta mmekọrịta:
WAG ahụ mara mma, Toni Terry abụrụla nwanyị ruo ọtụtụ afọ maka John Terry. Ha abụọ bụ ndị obi ha bụ nwata bụ ndị maara ibe ha tupu John abịa ọhụụ.
Toni bụ onye na-eme ahụ ike na ahụ ya na-egosi na ọ na-enwe mmasị ịkwado ya.
Na-ekpe ikpe site na ọnụ ọgụgụ foto ọ na-ede na akaụntụ Instagram ya, mmadụ nwere ike ịmara na ọ bụkwa nwanyị na-agba ịnyịnya.
Ọ na-asọmpi England na asọmpi ejiji. Ọ na-agba ịnyịnya kemgbe ọ bụ nwata.
Mgbe ọ na-adịghị agba ịnyịnya, ọ na-akwado di ya nke ọma na na pụọ ​​na pitch kwa. Ndị enyi abụọ ahụ biri ogologo oge tupu ha ekpebie ka ha kee eriri.
John Terry nwere agbamakwụkwọ mara mma na Tori na Blenheim Obí na 15 June 2007. Ememe ahụ hụrụ ka ndị ama ama ama ama ama na-akwado ihe omume ahụ.
Agbamakwụkwọ ha mere otu afọ mgbe Toni mụsịrị nwa. N'ezie, John na nwunye ya Toni (née Poole) bụ nne na nna nke ejima, Georgie John na Summer Rose, a mụrụ na 18 May 2006 na Westminster, London.
Terry mere ememe ọmụmụ ha mgbe ọ na-agụ England maka Hungary mgbe ọ na-eme ememme ụmụaka.
Na 2009, aha Terry “Nna nke Afọ” mgbe ọ rutere elu nke ntuli aka nke ndị okenye UK na nyocha Daddies Sauce. Terry kwuru na ụmụaka ya bụ ndị na-agbapụ Lionel Messi.
Mmekọahụ gbasara ihe ndị ọzọ: Na Jenụwarị 2010, onye ọka ikpe ụlọ ikpe dị elu nyere iwu ka ọ gbochie mgbasa ozi ịkọ ebubo na Terry nwere ọnwa anọ na mbubreyo 2009.
Ọ bụ na Vanessa Perroncel, bụ enyi nwanyị mbụ nke Wayne Bridge, onye bụbu onye òtù Chelsea na England.
Mgbe ọtụtụ nrụgide na iyi egwu, e buliri iwu ahụ otu izu ka e mesịrị. Ọtụtụ akwụkwọ akụkọ British News mechara bipụta mgbaghara maka nwunye Wayne Bridge bụ Perroncel maka imebi nzuzo ya wee kwuo na akụkọ ahụ bụ “Na-abụghị eziokwu n'ọnọdụ ọ bụla”.
Perroncel n'onwe ya kwadoro na ihe ahụ ebubo ahụ emeghị. Gị, di ya na ndị na-agba bọlbụ ekweghị na ya.
Mkpesa ndị a na-aga n'ihu na-eduga na njikwa England Fabio Capello na-ewepụ Terry n'aka onye isi na 5 February 2010, dochie ya Rio Ferdinand.
A nabatara Terry dị ka onyeisi ndị agha n'afọ na - esote. Ka oge na-aga, onyeisi ndị agha Chelsea nwere nkwupụta a iji gwa ụwa;
"Emehiela m, mụ na ụmụ agbọghọ nọkwa n'azụ ya, nke ahụ ezighi ezi. Ọ maara banyere ya niile ugbu a ma anyị na-aga n'ihu. Agaghị m aghọgbu ya ọzọ. "
John Terry Ndụ Ezinụlọ:
John John Terry kewapụrụ onwe ya na Oriakụ Sue Terry, nwunye ya. Ọ bụ ezie na John Terry na-agba mbọ iduzi ndị otu Chelsea, ndị nne na nna ya maara na ha na-akpata esemokwu ndị na-emebi aha nwa ha dị ka onye isi.
NME: Nna John Terry biri na otu nwanyị tozuru oke ịbụ nwa ya nwanyị.
Ted Terry onye bụ 61 (dị ka n'oge ederede), na otu nwanyị Kenyan-nke atọ Evelyn Minkey, bụ onye dị afọ 41 n'oge edere Terry's Biography.
Ha zutere na November 2014 mgbe ha abụọ biri n'ọnụ ụzọ dịpụrụ adịpụ na Chafford narị, Essex.
Ọ bụ oge di ya Stefan Minkey na-agba alụkwaghịm Evelyn mụrụ na Kenya. Ya na Ted hụrụ ibe ha n'anya kpebiri ịkwaga n'otu ụlọ dị na Chichester, Sussex.
Otu ihe dị nso na nkewa ahụ kwuru, sị: "Ịgba alụkwaghịm ahụ adịghị mma, ma Ted adabaala na ya. Ha hụrụ ha n'anya n'ezie, ọ dịghịkwa ihe ọ bụla mmadụ nwere ike ime."
N’ọnwa Ọgọst nke afọ 2015, a kpọrọ ndị uwe ojii mgbe Ted na di di Evelyn bụ Stefan kwuru na ọ bịara ịkụ ụlọ Evelyn. Onweghi onye jidere.
Ted abanyela na esemokwu ụfọdụ n'oge gara aga. E jidere ya na fim na-ere cocaine na onye na-ede akụkọ nzuzo.
O kwetara inyefe gram atọ site n'aka ndị na-ebutara ya oge niile na ego nke - 120 - ọ bụrụhaala na ọ nwetara mgbakwunye £ 40 iji zụta gram maka onwe ya.
Ọ gwara onye nta akụkọ ahụ, bụ onye mere ka onye ọkwọ ụgbọala na-azụrụ ọgwụ ndị ahụ maka ọgaranya ya bara ọgaranya: 'Ihe ndị ahụ niile dị mma. Esi m na ya rịtuo. '
O kwukwara, sị: 'Nke a bụ naanị n'etiti mụ na gị. Ekwula ya na abụ m nna John Terry. '
John Terry, onye ọnụ ahịa ya ruru estimated 10million mgbe ahụ, amaghị ihe ọ bụla gbasara azụmahịa cocaine ma ọ bụ omume nna ya.
Ihe omume a jọgburu onwe ya mere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu afọ mgbe nne John Terry bụ Sue jidere na ntụtụaka (Akụkọ dị n'okpuru).
Nne: E jidere nne John Terry bụ Sue Terry, 50, na nne di, Sue Poole, 54, mgbe e jidere ya na £ 800 nke uwe na ihe oriri sitere na Tesco na Marks & Spencer. Nne ya bụ onye e sere onyinyo foto dị n'okpuru.
E kwuru na n'ime ihe ndị a bụ mkpịsị aka ụmụ nwanyị, legg, uwe elu nkịtị, elekere ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị, akwụkwọ egwu akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, nri, ụtọ na nri anụ ụlọ.
Umu nwanyi abuo, ndi bi n'otu uzo di ka kpakpando Chelsea, ndi uwe ojii kwusiri ike ha ka ha na-ebu ugbo ha n'otu ulo ahia ahia na Weybridge, Surrey.
ELDER BROTHER: Nwanne nwoke nke nwanne Terry, Paul (amụrụ 1979), bụ onye ọkpụkpọ egwuregwu bọọlụ mbụ, na-egwuri egwu maka Dagenham & Redbridge na Yeovil Town.
Paul nwere ụmụ abụọ na nwunye ya bụ Sarah Konchesky, nwanne nwanyị nke Paul Konchesky, aha ya bụ Georgia Rose Terry na Frankie Edward Terry.
E boro ya ebubo na ya na onye ọlụlụ ibe ya nwere mmekọrịta Dale Roberts n'oge ha na Rushden & Diamonds, nke mere ka Roberts gbuo onwe ya.
John Terry jidere:
Na 2002, Terry tinyere aka na bouncer na ụlọ oriri na ọ Londonụ Westụ West London na onye otu egwuregwu Chelsea Jody Morris na Wimbledon's Des Byrne, nke dugara na ebubo ebubo na mwakpo.
Na August 2002, a kwụsịrị Terry nke ebubo ahụ n'ụlọ ikpe. N'ime okwu a, ndị Football Association nyere ya mmachi nwa oge site na ndị otu mba England.
John Terry Biography Eziokwu - 9/11 Mmegbu:
E boro Terry na ndị otu ya na Chelsea ebubo na ha na-a Americansụbiga mmanya oke na ndị America na ọdụ ụgbọ elu Heathrow ọtụtụ awa mgbe mwakpo ụjọ 9/11 na United States nke hapụrụ ndị njem ahụ.
"Anyị nwere ọtụtụ ndị America ebe a ma na-anwa ịkasi ha obi n'oge oge mkpa ha. Ka ọ dịgodị, ndị ikom a nọ na-achị ọchị ma na-egwu egwu, na-eyipụ uwe ha na iji ndị ọbịa anyị eme ihe, "
onye njikwa ụlọ oriri na ọ hotelụ toldụ gwara Daily Telegraph n'oge ahụ.
A kwụrụ ndị na-eme egwuregwu ahụ ụgwọ ọrụ izu abụọ (ihe dị ka ,130,000 XNUMX) ma ego ahụ gakwuuru ndị ikwu nke ndị ahụ.
Na 2 November 2011, e tinyere Terry n'okpuru nyocha ndị uwe ojii na-esochi ebubo nke ịkpa ókè agbụrụ mere na Anton Ferdinand n'oge egwuregwu na Queens Park Rangers.
Vidio vidio nke ekesara na ịntanetị dugara ebubo na Terry kpọrọ Ferdinand a “Fu *** ng bl * ck c * nt.”
Na nzaghachi na eserese vidio, Terry kwuru na ọ na-arịọ Ferdinand, "Oi, Anton, i chere na akpọrọ m gị bl * ck c * nt? ”
Na 3 February 2012, Njikọ Njikọ ahụ mere ihe site na Terry napụrụ ya onyeisi ndị isi nke England nke ugboro abụọ ruo mgbe edozi nsogbu ya.
Mgbe ikpe a malitere na July 2012. Thelọ ikpe ahụ kwuru na Ferdinand ma ọ bụ onye ọ bụla ọzọ anụbeghị okwu Terry, mana Terry n'onwe ya kwetara na ọ bụ ya duziri okwu ndị ahụ “Fu * king bl * ck cunt” na “fu * eze kn * bhead” na Ferdinand, mana ọ nọgidere na-ekwu na ọ jiri okwu ndị a mee ihe dị ka ụdị mkparị.
Na 27 Septemba 2012, ikpe ahụ kwubiri na ikpe mara Terry; a tara ya ahụhụ site na mmachi egwuregwu anọ na mma ,220,000 XNUMX.
Na 2014, Terry akwa racially gburu onye Irish na ọdụ ụgbọ oloko, kpọọ ya a "Pikey cu * t". O kwetara na ọha mmadụ na-arịwanye elu nke ọha na eze ma na-akwụ ya ụgwọ £ 200.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ John Terry Childhoodmụaka Akụkọ ya na akwụkwọ akụkọ efu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n’isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị!.